Soo dejisan WTFast 4.14.1.1877 – Vessoft
Qeybta: Xakamaynta waxqabadka
Bogga rasmiga ah: WTFast
WTFast – software ah in la kordhiyo xawaaraha wareejinta xogta dhexeeya your computer iyo server ciyaarta. Software waa shabakad caalami xogta loogu talogalay gaar ahaan loogu talagalay isagana. WTFast kuu ogolaanayaa inaad si ay u hagaajiyaan xawaaraha la xidhiidha ee sida World of Warcraft, Diablo, Tera, GiuldWars, League halyeeyo, Dota 2, World of Haamaha, Soddognimo, 2 kulan oo kale ay iwm software ayaa sidoo kale waxay kordhisaa xawaaraha jawaab ka server ka, hoos u dambaysaa iyo halista ah ee jarida ka server ciyaarta.
Kordhinta ee xawaaraha wareejinta xogta dhexeeya computer iyo server ciyaarta
Yaraynta halista ah ee jarida ka ciyaarta
Yaraynta ee Marlon
Soo dejisan WTFast
Faallo ku saabsan WTFast
WTFast Xirfadaha la xiriira
Ciyaar aan xadka lahayn – tasiilaad ayaa gacan ka geysanaysa bilaabida cayaaraha iyo softiweer-ka qaab buuxa oo shaashadda ah, xitaa haddii qaabkan aan lagu taageerin asalka.
Adeeg ciyaaraha daruurtii in Radidiyaha kulan ku technology ee video qulqulaya. Software waxay bixisaa loo maqli karo oo ka mid ah kulan ugu hawl badan ee ay hindiseen oo la soo koobin nidaamka hooseeyo.
Codsiga Popular download kulan ka Electronic Arts. Software macaamila bakhaar daruur iyo sifooyinka uu leeyahay faa’iido leh.